ElamaDatshi - ALinks
INetherlands ineenkonzo zempilo ezibalaseleyo kubemi bayo. Zombini ukhathalelo lwempilo lwabucala kunye noluntu luyafumaneka kweli lizwe. Uncedo lwezempilo loluntu kweli lizwe lufumaneka ngokukhululekileyo okanye ngeendleko eziphantsi kakhulu kubemi balo. Esidlangalaleni
Ungawufumana njani umsebenzi eNetherlands? Isikhokelo esikhawulezayo sabasemzini kunye nabahlali baseDatshi
Ngamana 26, 2021 IShubham Sharma imisebenzi, elamaDatshi
ENetherlands, kukho amathuba amaninzi emisebenzi kubantu bamanye amazwe. Iqela le-ING, iRoyal Dutch Shell Group, i-Unilever, i-Philips, kunye ne-Heineken zezimbalwa kwiinkampani ezininzi zehlabathi kunye nezamazwe-ngamazwe ezibiza ikhaya lase-Netherlands. Baninzi abasebenzi